Fakàna An-Keriny Mpanao Gazety Tany Kyrgyzstan: Sangisangy Ratsy sa Heloka Be Vava? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2012 6:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Dansk, Magyar, Italiano, Deutsch, English
Nazira Aytbekova, mpanolotra fandaharana malaza amin'ny fahitalavitra any Kyrgyzstan, dia nitory ireo mpanao gazety “mpanàla azy” izay naka an-keriny sy nandrahona ny hamono azy toy ny ‘ sangisangy mahazatra’ ho an'ny gazetiny.
Araka an'i Aytbekova [ru], izay mpanolotra fandaharana fialam-boly ankafizin'ny maro amin'ny fahitalavi-panjakana Kyrgyz, norahonana tamin'ny basy sy notampenana maso ary nalaina an-keriny nentina tany amin'ny tany efitra ivelan'i Bishkek, renivohitry ny firenena izy. Avy eo lehilahy maro no nanery azy hanala ny ampahany amin'ny akanjony, nandrahona ny hanolana sy hamono azy. Ny iray amin'ireo lehilahy ireo dia naka sary ny fihetsika rehetra. Ary afaka fotoana fohy dia nasaina nakimpiny ny mason'i Aytbekova. Rehefa nihiratra izy, dia nahita mpanao gazety tabloida telo avy amin'ny Super-Info any Bishkek izay nilaza taminy fa sangisangy io natao azy io.
Tsy nankasitrahan'i Aytbekova ilay ‘sangisangy’, izay no azo ilazana azy. Tamin'ny resany tamin'ny haino aman-jery taorian'ny zava-niseho, dia nolazainy fa ‘saika tratry ny aretim-po’ izy nandritra ny fakàna an-keriny azy. Nolazain'ny renin'ilay mpanao gazety fa misohika Aytbekova ary ‘ tsy fantatra izay zavatra mety hitranga aminy’. Nametraka fitarainana tany amin'ny mpitandro ny filaminana ilay mpanao gazety.
Nazira Aytbekova mitomany eo am-pitantarana amin'ny haino aman-jery ny momba ilay ‘sarintsarinà’ fakàna an-keriny natao taminy. Mbola nalaina tamin'ny lahatsary ‘Vazivazy Mainty sa sangisangy ?’ nampakarin'ny KTRKkg tao amin'ny Youtube ny 2 Novambra, 2012.
Ny haratsian'ilay ‘sangisangy’
Ilay ‘sarintsarinà fakàna an-keriny’ dia niteraka fanehoan-kevitra nipatrapatraka feno hatezerana tanatin'ireo seha-piresahana vaovao sy haino aman-jery sosialy.
Alina Alymkulova dia nibitsika [ru]:
@Alisha_A_: Tena manana vazivazy [adala] ny ‘Super-Info’. Efa nolazaiko foana fa gazety adaladala io. Nazira Aytbekova mahantra, saika tratran'ny aretim-po. Adala.
Nampian'i Zarema Zhunusova [ru]:
@Zarema1407: Ny zavatra tsy ampy kely dia tsy nasehon'i Aytbekova daholo ny tantara [momba ilay zava-niseho], dia ho toran'ny hehy ny mpamaky eo am-pamakiana ny ‘ sangisangy tsotra’ avoaka ao amin'ny gazety.
Mbola tao amin'ny Twitter ihany no nanoratan'i Sumsarbek [ru]:
@SumsarbekObbO:Tsy sangisangy ny herisetra mamoafady !!!
Ny mpampiasa ‘smarty’ ao amin'ny seha-piresahana vaovao knews.kg dia nanana [ru] fomba fijery nitovitovy amin'izany :
…Mahonena fa [ny famelàna vehivavy iray hahatsiaro ho voaolana ] dia tena lavitry ny atao hoe sangisangy !!! Marina ny azy, tokony halefa any amin'ny fitsarana ireo adala ireo.
Hanasazy ny gazety ?
Ny sasany amin'ny mpiserasera amin'ny aterineto dia mino fa ny gazety izay iasan'ireo mpanao gazety naka an-keriny an'i Aytbekova dia tokony koa ho voasazy. Ohatra, ‘OOK’ dia nanolo-kevitra :
tokony hakatona ny gazety mahasosotra noho ireo vazivazy ireo… ary ireo adala ireo dia tokony hatolotra ny fitsarana heloka be vava noho ny fanosihosena ny zo sy ny fahalalahan'ny olona sy fanaovany herisetra ara-tsaina sy ara-batana…!!
Na dia izany aza, ny gazety Super-Info dia nilaza fa ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana dia tsy nanome alàlana amin'ny fampihorohoroana sy ny fampiasan-kery nataon'ireo mpanao gazety izay naka an-keriny an'i Aytbekova. Mpanao gazety roa izay nandray anjara tamin'iny zava-niseho iny no voaroaka.
Fa maro ireo mpiserasera amin'ny aterineto no tsy resy lahatra. Ny mpampiasa ‘Nazgul’ dia nanoratra [ru] hoe:
Efa nilaza fa tsy nisy fifandraisana tamin'io zava-niseho io ny mpitantana ny Super-Info, manameloka ireo mpanao gazety tamin'izay zava-nitranga. Na dia izany aza, tsy nisy nanontany izay antony nahafahan'ireo mpanao gazety nanao iny zavatra iny [ fakàna an-keriny] nefa tsy fantatry ny mpitantana. Any amin'ny birao fanaovana asa soratra rehetra, ny soritr'asa sy ny asa ataon'ny mpanao gazety isan'andro dia ifanakalozan-kevitra amin'ny fivoriana isa-maraina isan'andro…
Haingana ny fiasan'ny gazety hanamaivanana ny dona vokatry ny zava-niseho.Toy ny filazàna nataon'i Adilet Kasymov tao amin'ny kloop.kg:
Te-hijery ny sangisangy tsotran-ndry zareo miaraka amin'ny olo-malaza hafa aho. Ho gaga ianareo, fa nofafany tao amin'ny tranonkalany ny rakitsary rehetra misy ireo sangisangy ireo. Ankoatra izany, niantso ireo rehetra izay niharan'io sangisangy io ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana, mba hanao sonia ireo taratsy manazava fa nanaiky handray anjara tamin'ilay sangisangy izy ireo…
Lazain'ny vadin'i Nazira Aytbekova fa hanao izay rehetra azony atao izy mba hahazahany antoka fa ho voasazy izay rehetra niray tsikombakomba tamin'ny fakàna an-keriny ny vadiny :
[Azo sokajiana ho ] fahambaniana ny nataon-dry zareo, ny fandrahonana hanolana, sy ny fandrahonana hamono. Hojerena eo ambanin'ny lalànan'ny heloka be vava ireo fihetsika rehetra ireo. Tafiditra anatin'ny andraikitry ny ady heloka be vava ireo fihetsika rehetra ireo.Tsy hihemotra izahay. Nangataka famelan-keloka im-betsaka tamiko ny trano famoahan-gazetin'ny Super-Info, fa tsy misy resaka ny famelan-keloka.
Ampahany amin'ny Tetikasa Fianaran'asan'ny GV Azia afovoany ao amin'ny Oniversite Amerikana Azia afovoany any Bishkek, Kyrgyzstan, ity lahatsoratra ity.